Imibala engcono kakhulu yokudweba izindonga zekamelo lokulala | Hlobisa
Imibala engcono kakhulu yokudweba izindonga zekamelo lokulala
UMaria Jose Roldan | | Amakamelo okulala
Umbala wezindonga zendlu ungaba obaluleke kakhulu kunalokho ongase ucabange ekuqaleni. I-hue epholile ingasiza ukudala umoya okhululekile futhi ozolile, kuyilapho umbala ofudumele ungasiza ukwenza igumbi elithile lithokomele.
Endabeni yekamelo lokulala, imibala esetshenziswa ekamelweni elinjalo ingasiza umuntu ukuba aphumule kangcono kakhulu. Esihlokweni esilandelayo siyakubonisa, yimiphi imibala engcono kakhulu ongayisebenzisa ekamelweni noma ekamelweni.
1 Imibala engcono kakhulu ongayisebenzisa ezindongeni zekamelo lokulala
2 Imibala okungafanele uyibeke ezindongeni zegumbi
3 Ezinye izici ezithonya ukuphumula
Imibala engcono kakhulu ongayisebenzisa ezindongeni zekamelo lokulala
Kuye kwenzeka ukukhombisa ngezifundo ezihlukahlukene ukuthi imibala yezindonga zekamelo lokulala ithonya ngokuqondile izinga lokulala kwabantu. Khona-ke sizokutshela ukuthi yimiphi imibala efaneleka kakhulu yekamelo endlini njengekamelo lokulala:
Umbala ongcono kakhulu wokubeka ezindongeni zekamelo uluhlaza okwesibhakabhaka. Kuyiphimbo ekhumbula ulwandle nesibhakabhaka, into esiza umuntu ukuba alale kangcono kakhulu. Kuyithoni edlulisa ukuzola futhi inemiphumela ephumuzayo.
Enye i-tonality ephelele lapho ukudweba izindonga zekamelo kuphuzi. Umbala ofudumele osiza ukudala umoya opholile, ozolile futhi omuhle. Ngaphakathi kwephalethi enkulu yemibala ephuzi enayo, kunconywa ukuthi ukhethe kulawo ma-shades alula aseduze ne-beige.
Okuluhlaza ngomunye wemibala engcono kakhulu ongayisebenzisa ekamelweni. Kuyithoni evusa imvelo futhi esiza ukuzuza indawo ekahle yokuphumula. Okuluhlaza umbala oveza ithemba kanye ne-positivism, into ebalulekile ngesikhathi sokulala nokuvuka usesimweni esihle.
Umbala wesiliva ungomunye umthunzi ophelele uma kuziwa ekusebenziseni ezindongeni zekamelo. Kuyinto encane esetshenziswa tonality lapho kupenda izindonga zendlu futhi ihlotshaniswa nobusuku.
Okumhlophe kungenye yemibala engcono kakhulu ongayisebenzisa ezindongeni zekamelo lokulala. Kungumbala oletha ukuzwana nokuthula ekamelweni, into ebalulekile uma kuziwa ekutholeni indawo lapho ungaphumula khona ngaphandle kwenkinga.
Imibala okungafanele uyibeke ezindongeni zegumbi
Ngendlela efanayo naleyo enemibala ethanda ukulala nokuphumula, kukhona olunye uchungechunge lwemibala okunganconywa ukuba lubekwe ekamelweni:
Eumbala onsomi ubhekwa njengombala omubi kakhulu ongawubeka ezindongeni zekamelo lokulala. Kuhlotshaniswa nokusungula futhi kuyakhuthaza kakhulu uma kuziwa ekulalelweni.
Omunye umbala ongafaneleki onsundu. Kumnyama kakhulu umthunzi futhi Lokho kungakha indawo engaphumuli kancane yokuphumula.
I-Grey i-tonality okungafanele uyikhethe lapho upenda izindonga zekamelo lakho. Kungumbala othize obandayo ongasizi ukuphumula.
Amanye ama-shades angathandeki okubekwa ezindongeni zekamelo lokulala abomvu noma awolintshi, njengoba zishukumisa ingqondo kakhulu futhi azikuvumeli ukuphumula okuhle.
Ezinye izici ezithonya ukuphumula
Ngaphandle kwemibala ekhethiwe lapho kupenda igumbi endlini njengekamelo lokulala, Kunolunye uchungechunge lwezici ezingaba nomthelela omuhle uma kuziwa ekuphumuleni ngokwanele futhi ukwazi ukulala kangcono kakhulu:
Leli gumbi akufanele libe nokukhanya okukhulu, ngakho-ke kuhle ukukhetha ukukhanya okufiphele.
Ikamelo lokulala kufanele libe yindawo ethule ngakho kufanele kube yingxenye yendlu lapho kungabi khona nhlobo umsindo.
Yiqiniso, ukuba nomatilasi omuhle nomcamelo kuyisihluthulelo futhi kubalulekile. uma kuziwa ekutholeni indawo lapho ungaphumula khona futhi ulale amahora adingwa umzimba wakho.
Ngamafuphi, kubalulekile ukucabangela imibala lapho udweba izindonga zekamelo lokulala. Kunconywa ukukhetha ama-shades athambile noma alula kunamanye aqine kakhulu. Imibala kufanele idale indawo lapho kungenzeka khona ukuphumula futhi uphumule ngemva komsebenzi onzima wosuku. Ngaphandle kokukhethwa okulungile kwemibala, kubalulekile ukuthi igumbi lokulala libe yindawo lapho ukuthula kuphefumula khona, ngakho-ke umhlobiso kufanele ulungele lolu hlobo lwegumbi endlini. Ungakhohlwa ukukhetha umatilasi omuhle futhi unikeze igumbi elishiwo ngokukhanya okufiphele futhi okungaqinile kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izikhala » Amakamelo okulala » Imibala engcono kakhulu yokudweba izindonga zekamelo lokulala
Indlela yokwenza i-windbreak yamasimu
Izinhlobo zamakamelo okugqoka ukuhlobisa ikhaya lakho ngesitayela